အမေစုရဲ့အသက်(၇၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လက် ဆောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဒေါင်း – XB Media Myanmar
အမေစုရဲ့အသက်(၇၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လက် ဆောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဒေါင်း
ဒီနေ့ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့ကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံအတွက် အယူမရှိ အပေးသာရှိတဲ့ မိခင်သ ဖွယ် အားကိုးရသူအမေစုရဲ့(၇၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေစုရဲ့မွေးနေ့အတွက် ပြည်သူချစ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါင်းကလည်း မွေးနေ့ဆုမွန်းကောင်းတော င်းပေးထားပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရေးသားကာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန် ရက်မှာတင်ထားထဲ့ပါတယ်။
ကဗျာလေးကတော့ “သူမနှလုံးသားဟာ ဗလာ”ဆိုတဲ့ကဗျားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကဗျာ လေးကိုတော့ ဒေါင်းက “”သူမနှလုံးသားဟာ..ဗလာ”နှလုံးသားထဲစီးဆင်းနေ သမျှချစ်ခြင်း မေတ္တာတရား အားလုံးပေးလိုက်တယ် နှလုံးသာထဲမှာ ဗလာ…ဗလာ….ဗလာ…စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံခြင်းဟာ ဗလာ…အသွားရှိပြီး…အပြန်မမျှော်လင့်ဗလာ…အပေးရှိ…အယူမရှိ…ဗလာ သူမသက်တမ်းအဆက်ဆက် အပြုံးမပျက်…ကမ္ဘာပျက်လဲမြန်မာမပျက်ဖို့ ရယူခြင်းဗလာဖြင့်..ရပ်တည်ဖြေရှင်းခဲ့…
ဒါဟာနှလုံးသားဗလာ…တန်ဖိုးဖြတ်မရ…ဗလာ…အချိန်တွေအကုန်ပေးခဲ့ မေတ္တာတရားအ ကုန်ပေးခဲ့ ဘဝရှိသမျှအခွင့်အရေးအကုန်ပေးခဲ့ သူမမှာဗလာတွေများစွာမို့ တို့အားလုံးအ ချင်း ချ င်း ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊စည်းလုံးခြင်း၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့ အနှိုင်းအဆမဲ့ပေးကြရအောင် ၇၅နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကစ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ပေါ့….
ကျွန်တော်ကတိပေးတယ် ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုချစ်တယ် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတိုင်းကို ချစ်တယ်လို့စိတ်ထဲကနေဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်ပါ…သူမနှလုံးသာထဲကဗလာကိုမြင်ရလိမ့်မယ် ဒေါင်း”ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီကဗျာလေးကို ဖက်လို့ ရအောင်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်…။
Source:DAUNG – ဒေါင်း
ဒီေန႔ဇြန္လ(၁၉)ရက္ေန႔ကေတာ့ ျမန္မာ နိုင္ငံအတြက္ အယူမရွိ အေပးသာရွိတဲ့ မိခင္သ ဖြယ္ အားကိုးရသူအေမစုရဲ့(၇၅)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမစုရဲ့ေမြးေန႔အတြက္ ျပည္သူ ခ်စ္သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေဒါင္းကလည္း ေမြးေန႔ဆုမြန္းေကာင္းေတာ င္းေပးထားၿပီး ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အေနနဲ႔ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ေရးသားကာ သူ႔ရဲ့လူမွုကြန္ ရက္မွာတင္ထား ထဲ့ပါတယ္။
ကဗ်ာေလးကေတာ့ “သူမႏွလုံးသားဟာ ဗလာ”ဆိုတဲ့ကဗ်ားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါကဗ်ာ ေလးကိုေတာ့ ေဒါင္းက “”သူမႏွလုံးသားဟာ..ဗလာ”ႏွလုံးသားထဲစီးဆင္းေန သမၽွခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရား အားလုံးေပးလိုက္တယ္ ႏွလုံးသာထဲမွာ ဗလာ…ဗလာ….ဗလာ…စြန႔္လႊတ္ အနစ္ နာခံျခင္းဟာ ဗလာ…အသြားရွိၿပီး…အျပန္မေမၽွာ္လင့္ဗလာ…အေပးရွိ…အယူမရွိ…ဗလာ သူမ သက္တမ္းအဆက္ဆက္ အျပဳံးမပ်က္…ကမၻာပ်က္လဲျမန္မာမပ်က္ဖို႔ ရယူျခင္းဗလာျ ဖင့္. ရပ္တည္ေျဖရွင္းခဲ့…
ဒါဟာႏွလုံးသားဗလာ…တန္ဖိုးျဖတ္မရ…ဗလာ…အခ်ိန္ေတြအကုန္ေပးခဲ့ ေမတၱာတရားအ ကုန္ေပးခဲ့ ဘဝရွိသမၽွအခြင့္အေရးအကုန္ေပးခဲ့ သူမမွာဗလာေတြမ်ားစြာမို႔ တို႔အားလုံးအ ခ်င္း ခ် င္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊စည္းလုံးျခင္း၊ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔ အႏွိုင္းအဆမဲ့ေပးၾကရေအာင္ ၇၅ႏွစ္ျပည့္ေ မြးေန႔လက္ေဆာင္ကစ ကမၻာတည္သေရြ႕ေပါ့….
ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးတယ္ ခင္ဗ်ားတို႔အားလုံးကိုခ်စ္တယ္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကလူတိုင္းကို ခ်စ္တယ္လို႔စိတ္ထဲကေနျဖစ္ျဖစ္ေျပာလိုက္ပါ…သူမႏွလုံးသာထဲကဗလာကိုျမင္ရလိမ့္မယ္ ေဒါင္း”ဆိုၿပီး ေရးသားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ဒီကဗ်ာေလးကို ဖက္လို႔ ရေအာင္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္…။
Source:DAUNG – ေဒါင္း
အမေစုရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပုံတူ Digital art လေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုဆုတောင်းပေး လိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ